I-Rolled Copper Foils Factory |I-China Rolled Copper Foil Abakhiqizi, Abahlinzeki
Insimbi ye-nickel inokuzinza okuphezulu emoyeni, ikhono eliqinile lokuphefumula, ingenza ifilimu encane kakhulu ye-passivation emoyeni, ingamelana nokugqwala kwe-alkali nama-acids, ukuze umkhiqizo uzinze ngamakhemikhali emsebenzini kanye nemvelo ye-alkali, akulula ukuyishintsha, kuphela oxidized ngaphezu 600 ℃;i-nickel plating layer inokunamathela okuqinile, akulula ukuwa;i-nickel plating layer ingenza ingaphezulu lezinto ezibonakalayo libe nzima, ingathuthukisa ukumelana nokugqoka komkhiqizo kanye ne-asidi ne-alkali ukumelana nokugqwala, ukumelana nokugqoka komkhiqizo, ukugqwala, ukusebenza kokuvimbela ukugqwala kuhle kakhulu.
I-Tin Plated Copper Foil
Imikhiqizo yethusi evezwe emoyeni ijwayele i-oxidation kanye nokwakheka kwe-carbonate yethusi eyisisekelo, enokumelana okuphezulu, ukungahambi kahle kukagesi kanye nokulahlekelwa kokudluliselwa kwamandla aphezulu;ngemva kokufakwa kwe-tin, imikhiqizo yethusi yakha amafilimu e-tin dioxide emoyeni ngenxa yezakhiwo ze-tin metal ngokwayo ukuvimbela i-oxidation eyengeziwe.
I-Beryllium Copper Foil iwuhlobo olulodwa lwesisombululo esiqinile se-supersaturated ingxubevange yethusi ehlanganiswe okuhle kakhulu kwemishini, ngokomzimba, izakhiwo zamakhemikhali kanye nokumelana nokugqwala.Inomkhawulo ophezulu wokuqina, umkhawulo wokunwebeka, amandla esivuno kanye nomkhawulo wokukhathala njengensimbi ekhethekile emva kokwelashwa kwesisombululo nokuguga.
I-Copper Nickel Foil
I-copper-nickel alloy material ijwayele ukubizwa ngokuthi ithusi elimhlophe ngenxa yendawo yayo emhlophe esiliva.i-copper-nickel alloy iyinsimbi ye-alloy ene-resistivity ephezulu futhi ngokuvamile isetshenziswa njenge-impedance material.Ine-coefficient yezinga lokushisa eliphansi le-resistivity kanye ne-resistivity emaphakathi (ukumelana no-0.48μΩ·m).Ingasetshenziswa phezu kwebanga lokushisa elibanzi.
I-RA Copper Foils ye-FPC
I-copper foil yamabhodi esekethe ingumkhiqizo we-copper foil owakhiwe futhi okhiqizwa yi-CIVEN METAL ngokukhethekile imboni ye-PCB/FPC.Le foil yethusi egoqiwe inamandla aphezulu, ukuguquguquka, i-ductility kanye nokuqedwa kwendawo, futhi ukuqhutshwa kwayo okushisayo nogesi kungcono kunemikhiqizo efanayo.
Ama-Foil Ethusi Agingqiwe Webhethri
I-Battery Rolled Copper Foil iyisisetshenziswa se-cathode esikhiqizwe yi-CIVEN METAL ikakhulukazi amabhethri asezingeni eliphezulu.Ubukhulu obufanayo kanye nokuma okuyisicaba kwe-foil yethusi kwenza kube lula ukugqoka futhi ungaqedi;
Ithusi ingxubevange yethusi ne-zinc, eyaziwa ngokuthi ithusi ngenxa yombala wayo ophuzi osagolide.I-zinc yethusi yenza i-material ibe nzima futhi imelane nokuhuzuka, kuyilapho i-material nayo inamandla amahle okubamba.